Doorashadii ugu horraysay oo Dimuquraaddi ah oo ka dhacaysa Mauritania | Saxil News Network
Doorashadii ugu horraysay oo Dimuquraaddi ah oo ka dhacaysa Mauritania
Dadweynaha reer Mauritania ayaa maanta u dareeraya doorasho laga yaabo in ay noqoto tii ugu horraysay ee si dimuquraaddi ah xukunka loola kala wareego tan markii dalkaas Galbeedka Afrika kuyaal uu madaxbanaanida qaatay.
Madaxweyne Mohamed Ould Abdel Aziza ayaa xukunka Afgambi u qabsaday sannadkii 2008-dii, balse waxa uu haatan oggolaaday in uu iscasilo.
In ka badan hal milyan oo qof ayaa sharci u haysta in ay codeeyaan doorashada dhacaysa maalinta Sabtida ah.
Saddex murashax ayaana ku tartamaya dooorashada madaxtinimada.
Ninka ugu cad cad ee Mohamed Ahmed Ould Ghazouani, oo ah wasiirka difaaca dalkaas ayaa ah murashaxa ugu dhow madaxweynaha haatan xilka haya, sida uu ku soo warramayo wariyaha BBC-da ee Galbeedka Afrika Louise Dewast.
Musharaxiinta mucaaradka ah ayaa haatan ka qayb galaya doorashadaan oo ay u arkaan tallaabo wanaagsan oo horay loo qaaday, kaddib markii ay qaaddaceen dhowr doorasho oo hore.
Musharraxiinta kale ee shanta ah ayaa waxaa ka mid ah Ra’iisal Wasaarihii hore ee Sidi Mohamed Ould Boubacar, iyo nin caan ah oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada iyo ka hortagga addoonsiga, laguna magacaabo, Biram Dah Abeid.
Guddiga doorashooyinka dalka ayaa ballan qaaday doorashooyin xor ah oo xalaal ah, waloow ay jiraan eedaymo ay mucaaradku dawladda u jeedinayaan.
Masuuliyiiinta warbaahinta Mauritania ayaa Jimiciii sheegay in aanay soo gaarin wax cabasho ah oo ku saabsan sida uu ol oluhu u socdo.
Arrinta ugu wayn ee ol olaha ayaa ah heerka maciishadda oo musharrax kasta uu ballan qaadayo in uu wax ka qabanayo.
Kaddib markii Mauritania ay madaxbaaninada ka qaadatay Faransiiska sannadkii 1960-kii, madaxweynihii ugu horreeyey ee dalkaas ayaa talada hayey 18 sano ka hor intii aanay ciidamadu inqilaabin.
Dhowr afgambi oo kale ayaa ka dambeeyey, kuwaas oo dhacay sanadihii 1984, 2005, iyo 2008.
Haddii lagu kala bixi waayo doorashada Sabtida dhacaysa, doorasho kale ayaa lagu wadaa in la qabto 6-da bisha July.